Lactoferrin (LF) နို့တိုက်သတ္တဝါများကိုနို့တိုက်ကျွေးခြင်းနှင့်ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသခြင်းဖြစ်သည်။ အစောပိုင်း ၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ စတင်ကာ glycoprotein ၏ကုထုံးတန်ဖိုးနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွင်အခန်းကဏ္establishကိုတည်ဆောက်ရန်လေ့လာမှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များသည်မိခင်များကိုနို့တိုက်ခြင်းမှဖြည့်စွက်စာများရရှိနိုင်သော်လည်းစီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်သည့် Lactoferrin အမှုန့်သည်အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
1. Lactoferrin ဆိုတာဘာလဲ
လက်ကိုဖရိုရင် transferrin မိသားစုမှပိုင်ဆိုင်သောသံ - စည်းနှောင်ထားသော glycoprotein ဖြစ်သည်။ ဤပရိုတိန်းသည်ပantibိဇီဝဓာတ်များစွာပါဝင်ပြီးလူနှင့်နွားနို့များတွင်ပါရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်မျက်ရည်များ၊ တံတွေးများ၊ နှာခေါင်းအရည်များ၊ ပန်ကရိယဖျော်ရည်နှင့်သည်းခြေရည်စသည့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာထုတ်ယူမှုအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကရောင်ရမ်းမှုလှုံ့ဆော်မှုကိုတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် glycoprotein ကိုထုတ်လွှတ်သည်။
သင်မပြုလုပ်မီ lactoferrin ဝယ်ဖြည့်စွက်ထိုက်တန်သည်ကိုသိရန်ဤဝေဖန်ချက်မှတစ်ဆင့်အရွက်တစ်ခုကိုယူပါ။
Lostroferrin ပမာဏအများအပြားကို colostrum တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည်မွေးဖွားပြီးနောက်ပထမဆုံးထုတ်လုပ်သောအရည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုနို့တိုက်ပြီးပထမ ၂ ရက် ၃ ရက်အတွင်းနို့တွင်ထုတ်လွှတ်သည်။ colostrum ၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်နီးကပ်လာသော်လည်း၊ အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ရင့်ကျက်သောနို့တွင် Lactoferrin ပမာဏများစွာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါဆို lactoferrin ကို bovine colostrum ကနေဘယ်လိုထုတ်ယူတာလဲ။
ပထမအဆင့်မှာနို့နှင့်နွားနို့ကိုခွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Whey သည်နို့ရည်ကိုအက်ဆစ်ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်သိုလှောင်ပြီးနောက်ကျန်ရှိနေသောအရည်ထွက်ရှိမှုဖြစ်သည်။ အထီးကျန်ဖြစ်စဉ်သည် hydrophobic interaction chromatography နှင့် ion-exchange chromatography ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းနောက်ဆားဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဆက်တိုက် elusion ပြုလုပ်သည်။
Bovine colostrum နွားများမှလာသည်။ ၎င်းသည်ပရိုတင်းများ၊ ပantibိပစ္စည်းများ၊ ဓာတ်သတ္တုများ၊ ဗီတာမင်များ၊ ဘိုဟိုက်ဒရိတ်များနှင့်အဆီများများပေါများသည်။ ဤရွေ့ကား parameters တွေကိုဤအရပ်မှ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဒိုမိန်းအတွက်သုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်များအကြားစိတ်ဝင်စားမှုဆွဲ colostrum ၏ကုထုံးတန်ဖိုးကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
မွေးကင်းစအချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ lactoferrin ပါဝင်မှုလျော့နည်းသွားသောကြောင့်အစားထိုးအရင်းအမြစ်ကိုမွေးကင်းစကလေးအားအကြံပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်မွေးဖွားပြီးနောက်ချက်ချင်းပုံမှန် LF ကို ၇-၁၄ မီလီဂရမ် / မီလီမီတာခန့်သာသောက်ပါ။ သို့သော်ရင့်ကျက်သောနို့နှင့်အတူ 7mg / ml နီးပါးကျဆင်းနိုင်သည်။
သငျသညျ immunological lactoferrin ၌ပျော်မွေ့လိုပါက, သင်သည် bovine colostrum ဖြည့်စွက်အပေါ်ဘဏ်လုပ်သင့်ပါတယ်။
စီးပွားဖြစ်လုပ် lactoferrin အမြောက်အများအမှုန့် bovine colostrum ၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤထုတ်ကုန်သည်ရူးသွပ်သောနွားမရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းနှင့်အတူစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေပုံရသူအချို့အတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ ငါဒီအခြေအနေဟာရှားပါးတယ်ဆိုတာကိုမင်းကိုပြောပြပါရစေ။ ထို့အပြင်အချို့သော lactoferrin ကလေးဖြည့်စွက်ဆေးများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာဆန်မှထုတ်ယူသောအရာများဖြစ်ပြီး Lactose ကိုသည်းမခံသောသူများ၏အကျိုးအတွက်ဖြစ်သည်။
2. အဘယ်ကြောင့် Lactoferrin အမှုန့်ကိုဖြည့်စွက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်၊ Lactoferrin ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာ?
Cutibacterium နှင့် propionibacterium သည်ဝက်ခြံအများဆုံးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ Lactoferrin သည်ဤဘက်တီးရီးယားများအားသံဓာတ်ဆုံးရှုံးစေပြီး၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများကိုလျော့နည်းစေသည်။
အချို့အခြေအနေများတွင်လွတ်လပ်သောအစွန်းရောက်များနှင့်ဓာတ်ပြုခြင်းအောက်စီဂျင်သည်ဆဲလ်များ၏ဒဏ်ရာနှင့် DNA ပျက်စီးမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။ oxidative စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဝက်ခြံပေါက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရ lactoferrin သည်အစွမ်းထက်သော anti-oxidant ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အခမဲ့အစွန်းရောက်များအားတိုက်ဖျက်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
Lactoferrin ကိုဗီတာမင်အီးနှင့်သွပ်များနှင့်အတူသောက်ခြင်းသည်သုံးလအတွင်းဝက်ခြံပေါက်ခြင်းနှင့် comedones များကိုလျော့နည်းစေပါသည်။
ထို့အပြင်ရောင်ခြင်းကြောင့်အပေါက်များပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ဝက်ခြံနှင့် cyst များဖြစ်ပေါ်လာသည်။ Lactoferrin ၏ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိများသည်တွေ့ရှိချက်များကိုလျင်မြန်စွာကုသနိုင်သည်။
အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်များကသင်၏အူသည်ကျန်းမာရေးသည်သင်၏အသားအရေကိုထင်ဟပ်စေသောအချက်ကိုအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ဥပမာ၊ သင်၏အူလမ်းကြောင်းအူလမ်းကြောင်းသည်ယိုယွင်းနေလျှင်သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင်မျက်နှာမျက်နှာပြင်လိမ်းဆေး (သို့) ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ probiotics အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အရေပြားရောင်ခြင်း၊ အားကစားသို့မဟုတ်နှင်းခူများကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Lactoferrin သောက်ခြင်းသည် Bifidus flora ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်စဉ်အစာခြေလမ်းကြောင်းရှိအန္တရာယ်ရှိသောအဏုဇီ ၀ သက်ရှိများကိုထုတ်လွှတ်ပေးလိမ့်မည်။
Lactoferrin သည်ဝက်ခြံကိုကုသခြင်းအပြင် psoriasis ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေပြီး၊ ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအကြားပျံ့နှံ့နေသည့် neuropathic foot အနာမှပြန်လည်နာလန်ထူလာစေသည်။
မရေတွက်နိုင်သောလေ့လာမှုများက Lactoferrin (LN) သည်ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဘက်တီးရီးယားများ၊ ကပ်ပါးကောင်များနှင့်မှိုရောဂါများကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်ကိုအတည်ပြုသည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်ဤပိုးမွှားများနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်ဆဲလ် receptors များအားပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
အထူးလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်သိပ္ပံပညာရှင်များကမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် lactotransferrin (LTF) လူ့ဗားရှင်းထက်ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်တားဆီးပိုမိုထိရောက်ခဲ့သည်။ In vitro လေ့လာမှုများကဤဖြည့်စွက်ဆေးသည်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုထိရောက်စွာစီမံကြောင်းဖော်ပြသည်။
အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများ, အသည်းရောင်စီ၏ဗိုင်းရပ်စ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်, lactoferrin လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအရသိရသည် Hepatology သုတေသန, ဒီကုသမှုဟာ Hepatitis C ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုပြန်မောင်းထုတ်ရန်တာဝန်ရှိသည့်ပရိုတိန်း interleukin-18 ၏ဖော်ပြမှုကိုတိုးစေသည်။ အများဆုံးထိရောက်မှုအတွက်လူနာများသည်တစ်နေ့လျှင်ဖြည့်စွက်ဆေး၏ ၁.၈ မှ ၃.၆ ဂရမ်ခန့်သောက်သင့်သည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ Lactoferrin ပမာဏနည်းပါးခြင်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပါဝင်မှုကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
LF ကို helicobacter pylori ကူးစက်မှုအတွက်ကုသမှုတစ်ခုအဖြစ်ယူဆသောထင်မြင်ချက်များရှိသည်။ သင်သည်သင်၏ပုံမှန်အနာကုသမှုနှင့်အတူဖြည့်စွက် stack အခါ, အခွင့်အလမ်းတွေကိုမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပိုမိုထိရောက်သောလိမ့်မည်ဟု။ Lactoferrin အမှုန့်များအသုံးပြုမှုသည်ဆေးညွှန်းထိုးဆေးများမရှိခြင်းသည်တရားမ ၀ င်ဟုအများစုကယူဆကြသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သံဓာတ်ချို့တဲ့သည့်သွေးအားနည်းရောဂါအတွက် ferrous sulfate နှင့် LF ၏ထိရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ရန်ကြိုးစားသည့်လက်တွေ့လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ, စမ်းသပ်မှုကနေ lactoferrin ဟေမိုဂလိုဘင်နှင့်သွေးနီဥများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုလှုံ့ဆော်အတွက်ပိုအစွမ်းထက်သက်သေပြခဲ့သည်။
glycoprotein ကိုစားသုံးသောအမျိုးသမီးများသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိသောသံဓာတ်များပါ ၀ င်သည်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ မမွေးခင်မွေးဖွားခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်နိမ့်ခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချရန် Lactoferrin လုပ်ဆောင်သည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့်ကလေးမွေးဖွားသည့်အရွယ်ရှိအမျိုးသမီးများအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောဖြည့်စွက်ဆေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူတို့၏စိတ်နေစိတ်များအတွင်း၌ရှိသည့်အနက်အချို့ကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ သက်သတ်လွတ်စားသူများနှင့်သွေးလှူဒါန်းသူများသည် Lactoferrin ဖြည့်စွက်ဆေးများမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သည်။
Lactoferrin ကလေးဖြည့်စွက်ဆေးသည်အူလမ်းကြောင်းကိုကောင်းမွန်စေပြီးအူကိုကျန်းမာစေပါသည်။ ၎င်းသည်ရောင်ရမ်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အန္တရာယ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားများကိုဖယ်ရှားပစ်သည်။ ဥပမာ၊ ဤပိုးမွှားများသည်အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများစုကိုဖြစ်ပွားစေပြီးအူလမ်းကြောင်းနံရံများကိုအချိန်မတန်မီသေစေနိုင်သည်။ အကယ်၍ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်သင့်ကလေးသည်နို့စို့အရွယ်မဟုတ်ပါကသင်သည် bovine lactotransferrin (LTF) သို့ပြောင်းရန်အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
3. Lactoferrin ကလေးအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများ
Lactoferrin ကလေးဖြည့်စွက်ချက်သည်မွေးကင်းစကလေးငယ်များ၏အူတွင်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏ကြီးထွားမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားပိုးမွှား Escherichia coli, Bacillus stearothermophilus, Staphylococcus Albus, Candida albicans နှင့် Pseudomonas aeruginosa ပါဝင်သည်။ Lactoferrin အမြောက်အများဖြည့်စွက်ဆေးကိုနေ့စဉ်စားသုံးခြင်းသည်ကလေးများတွင် noroviral gastroenteritis ၏အခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချပေးသည်ကိုလေ့လာမှုများစွာကထောက်ခံသည်။
ဆဲလ်အူထဲမှာ Lymphatic follicles ၏ကြီးထွားမှုကိုဖော်ပြနေစဉ် LF, endothelial ဆဲလ်များ၏ပြန့်ပွားအားပေးအားမြှောက်။ ထို့ကြောင့် Lactoferrin ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ပျက်စီးသောအူသိမ်ချပ်အတွက်ဆေးညွှန်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုထင်ရှားစေသည်။
LF သည်မွေးကင်းစကလေးများနှင့်မွေးကင်းစကလေးငယ်များနှင့်မွေးကင်းစကလေးငယ်များအတွက် LF သည်အဘယ်ကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်ဖြစ်သည်ကိုရှင်းပြပါ။ များသောအားဖြင့်ဤအုပ်စုသည်သံချို့တဲ့သည့်သွေးအားနည်းရောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Lactoferrin ကလေးဖြည့်စွက်မှုကကလေးငယ်၏စနစ်အတွင်းရှိဟေမိုဂလိုဘင်နှင့်သွေးနီဥများတိုးပွားစေပါသည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုများကသံဖြည့်စွက်မွေးကင်းစ၏အာရုံကြောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းထုတ်ဖေါ်။
တစ်ခါတစ်ရံ E.coli ကဲ့သို့သောအန္တရာယ်ရှိသောဘက်တီးရီးယားများသည်မွေးကင်းစကလေးများအူလမ်းကြောင်းရှိသံကိုစားသည်။ Lactoferrin သောက်ခြင်းသည်သံပိုးမွှားများကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအိမ်ရှင်သည်ရရှိနိုင်သည့်ဓာတ်သတ္တုများအားလုံးရရှိအောင်သေချာစေသည်။
LF သည်ကလေး၏ကိုယ်ခံအားစနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဤအ lactoferrin အမှုန့်အသုံးပြုမှုများတွင်မွေးကင်းစကလေးများကိုယ်ခံစွမ်းအားအတွက်တာဝန်ရှိသည့် macrophages, immunoglobulins, NK ဆဲလ်များနှင့် T lymphocytes များ၏လှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် LF ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဓါတ်မတည့်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
4. Lactoferrin ကကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်စေသလဲ။
Adaptive နှင့်ပင်ကိုယ်ခံစွမ်းအား Functions များအကြား Mediates
Lactoferrin သည်ကိုယ်ခံအားစနစ်၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်သဘာဝလူသတ်သမားဆဲလ်များ (NK) နှင့်နျူထရွန်ဖီလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ပရိုတင်းသည် phagocytosis ကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး macrophages ကိုတိုးပွားစေသည်။
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တုန့်ပြန်မှုအဘို့, LF T- ဆဲလ်များနှင့် B- ဆဲလ်များ၏မော်ဂျူအတွက်ကူညီ။ ရောင်ရမ်းအချက်ပြ၏အမှု၌, ပင်နှင့်သပ္ပါယ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှစ် ဦး စလုံးဖြစ်ပျက်မှုကိုတန်ပြန်ရန်ပေါင်းစည်းပါလိမ့်မယ်။
Lactoferrin သည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလိုလားသော cytokines နှင့် interleukin 12 ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်သည်။ ၎င်းသည် intracellular pathogen များနှင့်ခုခံကာကွယ်နိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသည်။
စနစ်တကျရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုရောဂါ (SIRS) တွင်ဖျန်ဖြေပေးခြင်း
၏အခန်းကဏ္ဍကို lactoferrin အမှုန့် ဓာတ်ပြုခြင်းအောက်စီဂျင်မျိုးစိတ် (ROS) ကိုဖိနှိပ်ရာတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုလေ့လာရာ၌အခြေခံကျသည်။ ROS တိုးများလာခြင်းက apoptosis သို့မဟုတ်ဆယ်လူလာဒဏ်ရာကြောင့်ရောင်ရမ်းတဲ့အန္တရာယ်များကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။
Lactoferrin ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးဂုဏ်သတ္တိများသည်ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ကပ်ပါးကောင်နှင့်ဖန်းဂတ်စ်ရောဂါပိုးများကိုကူးစက်စေသည်။
ကြီးထွားမှုနှင့်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်အဏုဇီဝဗေဒများသည်သံအပေါ်မူတည်သည်။ အိမ်ရှင်ကိုသူတို့ကျူးကျော်လာတဲ့အခါ LF ကသူတို့ရဲ့သံအသုံးချနိုင်စွမ်းကိုတားဆီးတယ်။
ရောဂါကူးစက်မှု၏ကန ဦး အဆင့်တွင် Lactoferrin (LF) သည်နိုင်ငံခြားလှုံ့ဆော်မှုကိုနည်းလမ်း ၂ မျိုးဖြင့်တန်ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။ ပရိုတိန်းသည်ဆယ်လူလာ receptors များကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသို့မဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဆက်နွယ်ခြင်းဖြစ်သဖြင့်အိမ်ရှင်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။ Lactoferrin ၏အခြားရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များသည်ရောဂါပိုး၏ဆဲလ်လမ်းကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
လေ့လာမှုအတော်များများသည် lactoferrin အမှုန့်ကို Herpes ဗိုင်းရပ်စ်၊ HIV ကူးစက်မှု၊ Human hepatitis C နှင့် B၊ တုပ်ကွေးနှင့် hantavirus တို့ကိုစီမံရာတွင်အသုံးပြုသည်ကိုအတည်ပြုသည်။ ထို့အပြင်ဖြည့်စွက်စာသည် alphavirus, rotavirus, human papillomavirus နှင့်အခြားသောအရာများ၏ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးခဲ့သည်။
အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် Lactoferrin သည်ကူးစက်မှုအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်လက်ရှိဗိုင်းရပ်စ်ပမာဏ၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချနိုင်လိမ့်မည်ဟုသင်စိတ်ချနိုင်သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများအရ LF သည် SARS pseudovirus ကိုထိန်းချုပ်ရန်ထိရောက်ခဲ့သည်။ SARS-CoV-2 သည် SARS-CoV နှင့်တူညီသောအတန်းသို့ကျရောက်သောကြောင့် Lactoferrin သည် COVID-19 ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
ဆရာဝန်များကသင်၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားလုပ်ဆောင်မှုများကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည် coronavirus မှကာကွယ်မှုမပေးနိုင်ဟုဆိုသော်လည်း Lactoferrin ဖြည့်စွက်ဆေးသည်တိုက်ပွဲတွင်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်အသက်အရွယ်ကြီးသူများနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားနိမ့်သူများသည် COVID-19 ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေမြင့်မားကြောင်းလေ့ကျင့်သူများကသတိပြုမိကြသည်။
5. Lactoferrin အမှုန့်အသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးပြုမှု
Lactoferrin အမြောက်အများအမှုန့်သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်၎င်း၏ဆေးဖက်ဝင်တန်ဖိုးကိုတည်ဆောက်လိုသောသုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ပညာရှင်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင်ရောဂါကာကွယ်ခြင်း၊ အာဟာရဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပိုးသတ်ဆေးများနှင့်အလှကုန်များတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခြင်းအလားအလာရှိသည်။
သင်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်များအတွက်၎င်းဒြပ်ပေါင်းကိုခိုင်လုံသော lactoferrin အမှုန့်ပေးသွင်းသူများထံမှရရှိရန်သေချာစေပါ။
Lactoferrin အမှုန့် အသုံးပြုသည် ကလေးနို့မှုန့်
မွေးကင်းစကလေးအမှုန့်ဖော်မြူလာသည်မိခင်မှနို့စစ်စစ်၏ဇီဝဓါတုဗေဒကိုထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေပါသည်။ Lactoferrin သည်မိခင်နို့တွင်နံပါတ်နှစ်အပေါများဆုံးပရိုတင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကလေးငယ်အားအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုယူဆောင်လာခြင်းအတွက်လူကြိုက်များသည်၊ သံဓာတ်ကိုကိုယ်ခံစွမ်းအားကာကွယ်ခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာသောအရိုးများကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
Lactoferrin သည် colostrum ဟုလူသိများသောမိခင်၏နို့ရည်တွင်အများအပြားပါ ၀ င်သည်။ Colostrum တွင် mililiter နှုန်းတွင်ရင့်ကျက်သောနို့ရည်ထက်နှစ်ဆပိုများသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအကောင်းဆုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အငယ်ဆုံးသောမွေးကင်းစကလေးငယ်များသည် Lactoferrin မြင့်မားစွာပါဝင်မှုလိုအပ်သည်။
မွေးကင်းစကလေး၏ကိုယ်ခံအားစနစ်တိုးတက်မှုကိုမွေးကင်းစကလေး၏ပုံသဏ္inာန်ရှိ Lactoferrin အစိတ်အပိုင်းမှထောက်ပံ့သည်။ ပရိုတိန်းသည်မွေးကင်းစကလေး၏ကိုယ်ခံအားစနစ်တွင်အရေးပါသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပထမဆုံးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနှင့်ပိုးမွှားကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်များသောအားဖြင့်အိုင်းယွန်းလ်ဓာတ်ငွေ့ထွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားမှုအတွက်အရေးပါသည်။ ထို့အပြင် Lactoferrin သည်ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်၏ကွဲပြားခြားနားမှု၊ ပြန့်ပွားမှုနှင့်ခုခံအားဆဲလ်များကိုအသက်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုကိုအားဖြည့်ပေးသော antioxidant အဖြစ်လုပ်ဆောင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
6. Lactoferrin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Lactoferrin အမြောက်အများဆေးများ chancy နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းသည်နွားနို့မှဆင်းသက်လာသောအခါ၎င်းကိုတစ်နှစ်လျှင်ပမာဏများစွာဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာစားသုံးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင်ဆန်ထွက်ရှိချိန်တွင်နှစ်ပတ်ဆက်တိုက်အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းသည်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ပုံမှန် lactotransferrin (LTF) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါဝင်သည်;
Lactoferrin ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုကျော်လွှားရန် 200mg နှင့် 400mg အကြားသောက်ရန်အကြံပြုပါသည်။ နှစ်လမှသုံးလအထိသင်ယူသင့်သည်။ ရှားရှားပါးပါးကိစ္စများတွင်ကာလသည်ခြောက်လအထိတက်နိုင်သည်။
7. Lactoferrin ကနေဘယ်သူတွေအကျိုးရနိုင်မလဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလအတွင်းဤဖြည့်စွက်ဆေးကိုသောက်သုံးခြင်းသည်သန္ဓေသား၏အရွယ်အစားနှင့်၎င်း၏အလေးချိန်အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ မိခင်သည်နို့တိုက်နေစဉ်ကာလအတွင်း lactoferrin သောက်သုံးမှုအတိုင်းဆက်သောက်ပါကသူမ၏နို့ရည်ထုတ်လုပ်မှုသိသိသာသာတိုးတက်လာလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကျန်းမာသောခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကလေးငယ်သည် colostrum တွင်သွယ်ဝိုက်။ ဂုဏ်တင်သည်။
Lactoferrin ဖြည့်စွက်စာသည်နို့စို့အရွယ် မှစ၍ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းမှဓါတ်မတည့်မှုများကိုကာကွယ်ပေးသောနို့စို့ကလေးအားအစွမ်းထက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေသည်။ ထို့အပြင်ဖြည့်စွက်သည်နို့စို့အရွယ်ကလေးငယ်၏ပထမဆုံးအူသိမ်လှုပ်ရှားမှုတွင်ကူညီသည်။ colostrum ကြွယ်ဝသောမွေးကင်းစကလေးငယ်ဖော်မြူလာများကို Lactoferrin အမှုန့်ပေးသွင်းသူများနှင့်ဒေသဆိုင်ရာနှင့်အွန်လိုင်းမှရရှိနိုင်ပါသည်။
Lactoferrin ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ဟေမိုဂလိုဘင်၊ သွေးနီဥများနှင့် ferritin အဆင့်များကိုသိသိသာသာတိုးပွားစေသည်။ လူအများစုသည်သံချို့တဲ့မှုကိုတားဆီးရန် ferrous sulfate ကိုအသုံးပြုကြသော်လည်း Lactoferrin သည်ပိုမိုအားကောင်းကြောင်းသုတေသနပြုချက်များစွာကဖော်ပြသည်။
သင်သည်သက်သတ်လွတ်စားသူသို့မဟုတ်မကြာခဏသွေးလှူဒါန်းသူဖြစ်ပါကဟီမိုဂလိုဗင်နှင့် ferritin အဆင့်နိမ့်သောအစားအစာများအတွက်သံဓာတ်ပါသောအစားအစာများလိုအပ်လိမ့်မည်။ မဟုတ်ရင်၊ အွန်လိုင်းစျေးသည်များထံမှ lactoferrin ကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
Lactoferrin သည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောဂါပိုးမွှားများမှကာကွယ်ရန်ကူးစက်စေနိုင်သောပိုးမွှားများထုတ်လွှတ်ခြင်းနှင့်ဘက်တီးရီးယားနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များပျံ့နှံ့ခြင်းကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ပေးသည်။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းသည်အိမ်ရှင်၏ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်တာဝန်ရှိသည့်အချက်ပြလမ်းကြောင်းများပြုပြင်ခြင်းတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည်။
Lactoferrin သည်ဖျန်ဖြေသူအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့်ပင်ကိုယ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားလုပ်ဆောင်မှုများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုပေါင်းကူးပေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်အဏုကြည့်ခြင်းနှင့်နက္ခတ္တဗေဒပညာရပ်များကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် phagocytic လုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေသည်။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်အဘို့, ဒီဒြပ်ပေါင်းအသီးသီးဆဲလ် -mediated နှင့်ဟာသကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုဖော်ပြသည့် T- ဆဲလ်များနှင့် B- ဆဲလ်များ၏ရင့်ကျက်အရှိန်မြှင့်။
8. IgG နှင့်အတူ Lactoferrin
lactoferrin လိုပဲ IgG သို့မဟုတ် immunoglobulin G သည်နို့တိုက်သတ္တဝါများနို့တွင်ကာကွယ်ပေးသောပိုးမွှားကာကွယ်သည့်ပရိုတင်းဖြစ်သည်။
Lactoferrin နှင့် IgG အကြားဆက်နွယ်မှုကိုရှင်းပြရန်လေ့လာမှုများစွာရှိသည်။
colostrum တွင် lactoferrin ပါဝင်မှုသည် IgG ထက်သိသိသာသာမြင့်မားသည်။ သုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်များအဆိုအရနို့၌ဤပရိုတိန်းပမာဏကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
ဥပမာ lactoferrin နှင့် IgG နှစ်မျိုးလုံးသည်အပူနှင့်စားသုံးခြင်းကိုထိခိုက်လွယ်သည်။ Immunoglobulin G သည် ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအပူကုသမှုကိုခံနိုင်သော်လည်းစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာခံနိုင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် lactoferrin သည် 100 ° C တွင်လုံးဝယိုယွင်းပျက်စီးသည်အထိအပူချိန်တိုးလာသည်နှင့်တဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းသွားသည်။
ဤအချက်များကို အခြေခံ၍ မွေးကင်းစနို့ကိုပြုပြင်သည့်အခါအချိန်နှင့်အပူချိန်သည်အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာများဖြစ်ကြောင်းသင်သတိပြုသင့်သည်။ နို့စားကျက်စားခြင်းသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သဖြင့်လူများစုသည်ခြောက်သွေ့အေးခဲစေရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
၏အာရုံစူးစိုက်မှု Lactoferrin (146897-68-9) မွေးဖွားပြီးနောက်၎င်း၏အထွတ်အထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားချိန်တိုးလာသည်နှင့်အမျှဤပရိုတိန်းသည် colostrum ကိုလျှော့ချပေးနိုင်သောကြောင့်တဖြည်းဖြည်းလျော့လာသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နို့ကာလတစ်လျှောက်လုံး immunoglobulin G ၏အဆင့်ဆင့်ကျဆင်းမှုနီးပါးမှုမရှိခြင်းကို။
Lactoferrin သည်နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါ၏နို့ရည်ထဲတွင်များစွာကျဆင်းသော်လည်း၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည် IgG ထက်ပိုမိုမြင့်မားပါသည်။ ဤအချက်သည် colostrum၊ အသွင်ကူးပြောင်းရေးသို့မဟုတ်ရင့်ကျက်သောနို့၌ဖြစ်စေဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
Yamauchi, K. , et al ။ (2006) ။ Bovine Lactoferrin - အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုဆန့်ကျင်သောလုပ်ဆောင်မှုယန္တရား။ ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ။
ဂျက်ဖရီ, KA, et al ။ (2009) ။ Lactoferrin ကိုသဘာဝကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း လက်ရှိဆေးဝါးဒီဇိုင်း။
Lepanto, MS, et al ။ (2018) ။ Lactoferrin ခံတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏ထိရောက်မှုသည်ကိုယ် ၀ န်နှင့်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မဟုတ်သောအမျိုးသမီးများအားသွေးအားနည်းရောဂါနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းသွေးအားနည်းရောဂါကုသခြင်း - Interventional Study ။ ရောဂါပြီးပညာအတွက်နယ်စပ်ဒေသ.
ရွှေပန်းထိမ်, SJ, et al ။ (1982) ။ IgA, IgG, IgM နှင့် Lactoferrin အစောပိုင်းနို့တိုက်နေစဉ်နှင့်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၌လူ့နို့ရည်ပါဝင်သည်။ အစားအစာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ဂျာနယ်
Smith, KL, Conrad, HR နှင့်ပေါ်တာ, RM (1971) ။ Involuted Bovine Mammary Gland မှ Lactoferrin နှင့် IgG Immunoglobulins ။ နို့သိပ္ပံဂျာနယ်။
Sanchez, အယ်လ်, Calvo, အမ်နှင့် Brock, JH (1992) ။ Lactoferrin ၏ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္။ ။ ကလေးဘဝအတွက်ရောဂါ၏မော်ကွန်းတိုက်။
Niaz, ခ, et al ။ (2019) ။ Lactoferrin (LF) - သဘာဝအဏုဇီဝဗေဒဆန့်ကျင်ရေးပရိုတိန်း။ အစားအစာဂုဏ်သတ္တိများ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်။